यात्रा कसरी तालिम युरोप Thalys संग | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > यात्रा कसरी तालिम युरोप Thalys संग
पढ्ने समय:3मिनेट(Last Updated On: 18/09/2020)
युरोप यात्रा सपना त धेरै को लागि साँचो आउन छ. र तपाईं मौका छ पर्याप्त भाग्यवान् हुनुहुन्छ भने आफ्नो बाल्टिन सूची बन्द यस गन्तव्य टिकटिक र सबै हेर्नुहोस् युरोप मा सबै भन्दा राम्रो ठाउँ, तपाईं चाहनुहुन्छ छौँ अनुभव सकेसम्म स्मरणीय बनाउन. त्यसोभए ध्यान दिनुहोस् कसरी युरोपमा थालिसको साथ ट्रेवल ट्रेन गर्ने.
रेल यात्रा युरोप मा पर्यटन को धेरै squeeze गर्न savviest तरिका हो. Thalys एक उच्च गति रेल लाइन हो कि तपाईं शैली र गति मा सबै प्रमुख शहरहरु मा पुग्न सक्छ जबकि तपाइँको सुरक्षा सम्झौता नगरेको।.
प्रसिद्ध "लाल ट्रेन" चिन्न
जब तपाईं Thalys संग युरोप मा यात्रा तालिम, यो रेल यसको इन्जिन को जीवंत रातो रंग लागि "रातो ट्रेन" को रूपमा परिचित छन्, जुन तपाईसँग जोड्न सक्ने उच्च-गति रेल लाइन हो 17 मार्फत शहर पश्चिमी युरोप सान्त्वना मा. को Thalys लाइन फ्रान्सेली-बेल्जियम उच्च गतिको रेल बनेको छ, को HSL मार्फत एम्स्टर्डम सेवा. ब्रसेल्स लाइन लागि हब रूपमा सेवा संग, तपाईं यस्तो पेरिस युरोप मा प्रमुख शहर पुग्न सक्दैन, लीज, एम्स्टर्डम, आन्ट्वर्प, कोलोन, र हेगुइ.
यी उच्च गतिको रेल को गति मा यात्रा 300 प्रति घण्टा मी. रेल लाइन गर्न गोप्य छ ब्रसेल्स देखि जाने पेरिस मा एक घण्टा र एक आधा अन्तर्गत. र तपाईं पेरिस बाट मात्र एम्स्टर्डम गर्न सबै बाटो सार्न सक्नुहुन्छ3घन्टा र 20 मलाई! को Thalys भन्दा बढी बनाउँछ 50 गोलो रेल यात्राको प्रत्येक दिन. छन् 27 गाडिहरु एक दिन चलिरहेको पेरिस - ब्रसेल्स मार्ग एक्लै.
सही क्लास छनौट
मानक - तिनीहरूले सेवा तीन कक्षाहरू देखि जब तपाईं सफर Thalys संग युरोप मा यात्रा चयन गर्न, सुविधा, र प्रिमियम.
तपाईं कहाँ आनन्द उठाउन सक्छौं दुवै सुविधा र प्रिमियम कक्षाहरू "1st क्लास" बस्ने प्रस्ताव रेल यात्रा थप legroom प्रदान आरामदायक reclining सिट को आराम मा. प्रिमियम छनौट को उल्टो रेल गरेको कर्मचारी आफ्नो सेवा छ खाना र आफ्नो सीट मा पेय. तपाईं पनि पेरिस र ब्रसेल्स मा Thalys lounges पहुँच हुनेछ.
सुविधा र प्रिमियम मा सिट एक मा प्रबन्ध छन्2+ 1 ढाँचा. र प्रत्येक केबिन मा, तपाईं मिल 1 तालिका बैठक, यसलाई जोडे यात्रा लागि पूर्ण बनाउन. मानक वा "2nd वर्ग" सिट एक हो2+2कार मार्फत ढाँचा.
सबै वर्ग जहाजमा वाइफाइ इन्टरनेट प्रस्ताव, बार-बफेमा पहुँच गर्नुहोस्, र तपाइँको लागि विशेष पावर सकेट तपाईंको उपकरणहरू मा plugging.
Thalys संग युरोप मा ट्रेन यात्रा को लागि टिकट खरीद
तपाईं Thalys रेल मा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अनिवार्य रेल आरक्षण गर्न छ. थालिस ट्रेनहरू उच्च मागहरू हुन् यसैले यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सकेसम्म अग्रिम ट्रेनको टिकट बुक गर्नुभयो.
तपाईं गर्न Thalys आफ्नो सिट आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ 90 अग्रिम दिन. र यदि तपाईं तपाईंको ट्रेन टिकट प्रारम्भिक बुक, तपाईं सम्म बचत गर्न सक्नुहुन्छ 75%!
Thalys को साथ युरोप मा ट्रेन यात्रा गर्न आरक्षण गर्न, पुस्तक एक ट्रेन अनलाइन. हामी तपाईंलाई कुनै पनि बुकिंग शुल्क चार्ज गरिरहनु भएको छैन सुनिश्चित र राम्रो दरहरू सम्भव प्राप्त गर्न Thalys काम.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-europe-thalys%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#traveleurope europetravel trainjourney Tranride रेल प्रशिक्षण सल्लाह रेल सुझावहरू रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह रेल यात्रा यात्रा ट्राभेलबिजियम travelfrance travelgermany ट्रेवलहोलैंड travelnetherlands traveltips